Umzi mveliso wase China wokucoca ukutya okuziinkozo, Umthengisi wezixhobo zokucoca ukutya okuziinkozo
Isetyenziswa ngokubanzi kwiifama, ematyeni okusila, kwiivenkile ezithengisa ukutya okuziinkozo nakwezinye iindawo zokulungisa ukutya okuziinkozo.
Isetyenziselwa ukususa ukungcola okulula okufana nomququ, uthuli kunye nokunye, ukungcola okucolekileyo okunjengesanti, imbewu yokhula encinci, iinkozo ezincinci ezinqunqiweyo kunye nezinto ezingcolileyo ezifana nomququ, izinti, amatye, njl.
I-TQSF ye-gravity destoner yokucoca iinkozo, Ukususa ilitye, Ukuhlela ingqolowa, Ukususa ukungcola kokukhanya njalo njalo.
Esi sahluli sokusebenza siphezulu se-vibro, kunye nejelo le-aspiration okanye inkqubo yokuphinda isetyenziswe isetyenziswa kakhulu kwizingqusho zomgubo nakwiisilos.
Iscreen sokujikeleza kwesikrini sisetyenziselwa ukucoca okanye ukubeka imathiriyeli ekrwada, ekondleni, kwirayisi yokugaya, kumzi mveliso weekhemikhali nakwimveliso yeoyile. Ngokutshintsha imisipha eyahlukeneyo yeesefu, inokucoca ukungcola kwengqolowa, umbona, irayisi, imbewu yeoyile kunye nezinye izinto eziyimbumba.
Isikrini sibanzi kwaye ukuhamba kukukhulu, ukucoca ukusebenza kuphezulu, intshukumo yokujikeleza ngokuthe tyaba izinzile ngengxolo ephantsi. Ukuxhotyiswa ngejelo lomnqweno, iyasebenza ngendawo ecocekileyo.
TCXT Series Magnet tubular yokucoca iinkozo, Ukususa ukungcola kwentsimbi.
Imagnethi yomazibuthe wethu othembekileyo wedrowa yenziwa ngokusebenza okuphezulu komhlaba kunqabile izixhobo ezisisigxina zemagnethi. Ke esi sixhobo sisinyithi esikhulu esisusa umatshini kumashishini afana nokutya, amayeza, i-elektroniki, iseramikhi, imichiza, njalo njalo.
Isihluzi seJet soxinzelelo oluphezulu
Lo matshini usetyenziselwa phezulu kwesisele ukuze kususwe uthuli kunye nevolumu yomoya encinci yenqaku elinye lokususa uthuli. Isetyenziswa ngokubanzi kwizingqusho zomgubo, kwiindawo zokugcina iimpahla nakwiidepho zokugcina eziziinkozo.
Ingcinezelo yoxinzelelo lwengqolowa ye-TSYZ
Flour mill izixhobo-TSYZ Series uxinzelelo dampener idlala indima ebalulekileyo kummiselo wengqolowa ukufuma ngexesha lenkqubo yokucoca ingqolowa kwizingqusho zomgubo.
I-Dampener enzulu sisixhobo esiphambili sommiselo wamanzi wengqolowa kwinkqubo yokucoca ingqolowa kumgubo wokugaya umgubo. Amandla kunye nokunciphisa ukunamathela kwe-bran kunye ne-endosperm eyinzuzo ekuphuculeni ukusebenza kakuhle kokugaya kunye ne-powder sieving.Besides, kuyanceda ukuphucula isivuno somgubo kunye nomgangatho wepinki. Umatshini unezibonelelo zemveliso ephezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ubunzima bokukhanya, umthamo wokunciphisa okuphezulu, ukuthamba okufanayo, okuzinzileyo nokuthembekileyo kunye nezinga eliphantsi lokuqhekeza ingqolowa. Kwinkqubo yokuthambisa ingqolowa idlala indima yokuba icocekile, ilungele inguqu kwezobuchwephesha kwindawo enkulu, ephakathi kunye encinci yomgubo wokugaya kunye nokukhethwa kweendawo zokugaya umgubo omtsha.
Uluhlu lweMLT Degerminator
Lo matshini umbona degerming, Ifakwe ngeendlela ezininzi phambili kakhulu, xa kuthelekiswa umatshini efanayo evela phesheya, MLT uthotho degerminator zingqineke ukuba ngcono xa exobuka kunye nenkqubo de-germinating.
Umoya wokurisayikilisha weAspirator
I-aspirator yokurisayikilisha umoya isetyenziselwa ukucoca izinto eziyimbewu xa kugcinwa ingqolowa, umgubo, ukutya, amayeza, ioyile, ukutya, ukupheka kunye namanye amashishini. I-aspirator yokuphinda isebenzise umoya inokwahlula ubumdaka obusezantsi kunye nezinto ezinamatye anqabileyo (njengengqolowa, irhasi, ipaddy, ioyile, umbona, njl. Isifunxi-moya sokurisayikilisha samkela ifom yomoya ejikelezileyo, ke umatshini ngokwawo unomsebenzi wokususa uthuli. Oku kunokugcina oomatshini abasusa uthuli. Kwaye ngenxa yokuba ayitshintshisi umoya kunye nehlabathi langaphandle, ke, inokuthintela ukulahleka kobushushu, kwaye ayingcolisi imeko-bume.
Isikhuseli esithe tyaba sisebenza ngokubanzi kunye nejelo le-aspiration okanye ijelo lokuphinda lenze kwakhona kwindawo yalo. Banokulahla ngokufanelekileyo amasuntswana egobolondo ahlukanisiweyo okanye ukungcola komphezulu okuziinkozo.